Ubuntu မှာ Office Online ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ 16.04 | Linux မှ
အသုံးပြုသူအများအပြား Windows မှ Linux သို့ကူးပြောင်းပါ အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသော်လည်းယနေ့တည်ရှိနေသောအခမဲ့ရုံးအစီအစဉ်များကိုအသုံးမပြုပါ ရုံး ၎င်းကိုသန်းပေါင်းများစွာသောသုံးစွဲသူများကအသုံးပြုနေတုန်းပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲလို့မေးခဲ့တယ် Ubuntu 16.04 တွင် Office Online ကို install လုပ်ပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းရှာခဲ့တယ်။
အောက်ဖော်ပြပါသင်ခန်းစာသည် Office Online ကို Ubuntu 16.04 တွင် install လုပ်ပြီးခွင့်ပြုပေးပြီးမည်သည့်အားဖြင့်ဖြစ်စေလိုအပ်သောမှီခိုမှုများနှင့်အလိုအလျောက်လိုအပ်သောမှီခိုမှုများနှင့် Office Online ကိုအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းအွန်လိုင်း - ပုံ - Omicrono
Ubuntu 16.04 တွင် Office Online ကိုထည့်သွင်းရန်အဆင့်များ
ဤ script ကို အသုံးပြု၍ Office Online installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်အနည်းငယ်နှေးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာရှိပါကမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာကတော့ repository ကို copy လုပ်ထားတာပါ ဇာတ်ညွှန်းအရာရှိ
အသစ်ထပ်မံထုတ်ယူထားသော directory သို့သွားပြီး .sh sudo ကိုသုံးပါမယ်
Script အလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့် Office Online suite ၏အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးကိုခံစားနိုင်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပြီးသတိပေးချက်များပေါ်လာလျှင်၎င်းတို့သည်လျစ်လျူရှုထားနိုင်သော package အချို့ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စီမံလိုပါက systemd ကို သုံး၍ ဤ script ၏စာရေးသူကကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်နိုင်သည်ဟုပြောသည်။
ဒါကြောင့်ဒီရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်နဲ့ online Office suite ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Ubuntu 16.04 တွင် Office Online ကိုမည်သို့ install လုပ်ရမည်နည်း
office.com ကို browser မှဖွင့ ်၍ မရတော့ပါလား။
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ရုံးမှာအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ထဲကို ၀ င်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ browser အတွက်ဖွင့်တာထက်သူတို့အတွက်အဲဒါဟာသူတို့အတွက်ပိုပြီးတကယ့်ကိုခံစားရတယ်။
၎င်းသည် libreoffice ကို online တွင်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်
၎င်းသည်မိုက်ခရိုဆော့်ရုံးမဟုတ်ပါ၊ အွန်လိုင်းတွင် libreoffice ဖြစ်သည်။ uninstall လုပ်နည်း
Alvaro rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ xubuntu 16.04 ရှိတယ်။ ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ဘူး။
Alvaro Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ငါ Ubuntu 16.04 နဲ့ virtual machine မှာ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာငါပြောမယ်။ တပ်ဆင်မှုမည်မျှကြာနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်နာရီဝက်ကျော်ကြာနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးရလဒ်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအကြံပေးရန် Lagarto ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည်မှာ Linux တစ်ခုသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတပ်ဆင်သည့်အချိန်များနှင့်လေ့ရှိပြီး၎င်းထက် ပို၍ တိုတောင်းသည်၊ , ငါအချိန်ပိုမိုခဲ့သည့်အချိန်များအတွက်ကစွန့်ခွာလိမ့်မယ် ... installation ကိုအမှန်တကယ်ဒေါသထွက်သောကွောငျ့!
"ဒီ script ကိုသုံးပြီး Office Online installation လုပ်ငန်းစဉ်ကနည်းနည်းနှေးကွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် installation ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့"
ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့သော repository မှသင်မြင်နိုင်သော script ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်နံပါတ်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအဖြစ်ပြသထားသောရှင်းလင်းချက်ကိုသင်သတိမပြုမိပါ။
"Installation သည်အလွန်ကြာမြင့်စွာကြာချိန် - ၂ နာရီမှ ၈ နာရီ (၄ င်းသည်သင်၏ဆာဗာ၏အမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်သည်) ဖြစ်မည်။ စိတ်ရှည်ပါစေ။ "
ဆိုလိုသည်မှာ installation ကို ၂ နာရီမှရှစ်နာရီအထိကြာနိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒေါသထွက်တာပဲ၊ သတိပေးတာကသစ္စာဖောက်မဟုတ်ဘူး
ငါအင်္ဂလိပ်လိုမပြောတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ရည်ညွှန်းထားတဲ့စာသားကိုနားလည်ပြီးဘာသာပြန်နိုင်ပေမဲ့လည်းဒီစာမျက်နာအမျိုးအစားကိုငါမသွားတတ်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ source code ကိုမဖတ်ရသေးတာကြောင့်; ကျွန်ုပ်သည်ရိုးရှင်းသောသုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကိုရှာဖွေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ repository စာမျက်နှာကိုမကြည့်သောကြောင့် "disclaimer" ကိုကြည့်။ မရပါ။ သို့သော်ဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ သူ၏စာသားမှတပ်ဆင်မှုကြာချိန်သည်နာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အနာဂတ်အသုံးပြုသူများသည်တပ်ဆင်ချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာမရှိနိုင်ပါကသတိပေးချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားသည်
တကယ်တော့ Lizard ကသူအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါတပ်ဆင်နည်းနည်းနှေးကွေးဖြစ်နိုင်သည်သောမှတ်ချက်ဖတ်ပါ, ဒါပေမယ့်သူကနာရီပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးအပြီးသတ်မထားပါဘူး ... နာရီဝက်အချိန်တပ်ဆင်ခြင်းအလွန်နှေးကွေးအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီဖို့အချိန်အများကြီးနဲ့တူပေမယ့်ဤအချိန်တွင်ငါပြီးသား hallucinating ဖြစ်ကြောင်းကို! နှစ်နာရီကျော်ကြာတော့မပြီးဆုံးသေးပါ။
ငါထပ်ခါတလဲလဲငါအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေမဟုတ်ခဲ့, သင်တန်းသူကသင်အသိပညာကိုကိုယ်ကျိုးမငဲ့မျှဝေခြင်းကိုတန်ဖိုးထားသည်၊ သို့သော်တစ်ခုမှာအနည်းငယ်နှေးကွေးသော installation ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ ... နှစ်နာရီကျော်လွန်သော installation ဖြစ်သည်။ ဒါဟာရိုင်းစိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အဆုံးသတ်မည့်နိမိတ်လက္ခဏာများမရှိသေးပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြောလိုက်တာကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Office Online ကို install လုပ်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပ်ဆင်တာသိပ်ကြာတာကြောင့်စက်ကိုစွန့်ခွာပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့သွားခဲ့ရတယ်။ ငါထွက်သွားတော့ ၃ နာရီကျော်သွားပြီ။ ငါပြန်လာသည့်အခါလေးနာရီခန့်ကြာပြီးနောက် (အနည်းဆုံးခုနစ်နာရီဖြစ်လိမ့်မည်) ကျွန်ုပ်သည်လက်ခံမှုလိုအပ်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်လက်ခံပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မမှတ်မိသောအမှားတစ်ခုနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြီးဆုံးပါ။ ထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, ဒါကြောင့်နောက်တဖန်ကြိုးစားရန်ငါ့စိတ်ကိုဖြတ်ကျော်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်လေးနက်မှုမရှိသော၊ မည်သူ့ကိုမျှနှောင့်ယှက်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောတပ်ဆင်သည့်အချိန်နှင့်ပတ်သက်သည့်အရိပ်အယောင်ကိုချိန်ညှိရန်သာအဓိကထားသည်။ အနည်းငယ်နှေးကွေးနေတယ်” လို့ပြောတယ်၊ အဲဒါကနာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်တပ်ဆင်ချိန်ကိုအကြမ်းဖျင်းစိတ်ကူးထားပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစား။ ပင်မရပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားလျှပ်စစ်ငွေတောင်းခံလွှာတွင်အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်နာရီများစွာတပ်ဆင်ခြင်းအကြောင်းပြောနေသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဆောင်းပါးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိပေးထားသည်ဟုဆိုခြင်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုအကဲဖြတ်ရမယ့်စာရေးသူပါ၊ ပိုပြီးတိကျတဲ့ညွှန်ပြချက်ကကျွန်တော့်ကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေမှာပါ။
Microsoft Office ဆိုတာဘာလဲ။ လိုင်စင်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
သူတို့ဟာမိုက်ကရိုဆော့တဲ့အနံ့တွေအားလုံးကိုမုန်းတဲ့အတွက်သူတို့ Linux ကိုသွားတာကိုတွေ့ရတာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ Linux အတွင်းမှာပထမဆုံးရှာတာကဒီမိုက်မဲသောအရာများဖြစ်သည်။ Wine, playonlinux, Windows ပုံရိပ်များဖြင့် virtual machine များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်၊ က MS အားလုံး။
အပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့ငါတို့အားလုံးကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်အမှု၌အလုပ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရုံးကိုမရပ်နိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားရွေးချယ်စရာဗားရှင်းများမပါသည့်အခြားပရိုဂရမ်များကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၄ င်းတို့သည်စီးပွားဖြစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်မတူပါ။ ထို့အပြင်၊ မတူကွဲပြားသောကွန်ပျူတာများတွင်တည်းဖြတ်နိုင်ရန်သဟဇာတဖြစ်သောဖိုင်များထုတ်လုပ်ရန်ပြtheနာရှိသည်။ ၎င်းသည်အာဇာနည်ဖြစ်သော်လည်းကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စော်ကားမည့်အစားသင်ယူပါ၊ နားလည်ပါ။
"Officeonline-install.sh: 293: officeonline-install.sh: Syntax အမှား - မမျှော်လင့်တဲ့ redirection"
# sudo ./officeonline-install.sh ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
ဤအရာကိုသင်မည်သို့ဖယ်ထုတ်သနည်း။ နှင့်ငါအသုံးပြုသူ lool ဖျက်ပစ်ကြဘူး
ငါသည်သင်တို့၏မေးခွန်း join ... ဘယ်လိုဖယ်ရှားသလဲ?